I-CBD CREAM NGE-TRYTRANQUIL.NET | Ukhilimu Ongcono Kakhulu Wango-2022 Wobuhlungu
Click lapha uku-oda kuwebhusayithi yethu yozakwethu redemperorcbd.com
Kunezindlela eziningi zokusebenzisa (i-CBD) cannabidiol. Kodwa-ke, uma udinga ukukhululeka kobuhlungu bamalunga akho, imisipha, noma izimo zesikhumba, ukhilimu we-CBD we-topical ungaba yisinqumo esingcono kakhulu.
Okhilimu be-CBD banoma iyiphi i-lotion, ukhilimu, noma i-topical efakwe ku-CBD. Zingasetshenziswa ngqo esikhumbeni.
Noma ucwaningo ngokhilimu we-CBD lusezigabeni zalo zokuqala, sazi okuningi ngalo.
Ucwaningo Lomthombo Othenjwayo kumagundane luthole ukuthi okhilimu be-CBD be-CBD bangasiza ekwelapheni izinhlungu ezinzima nokuvuvukala, okungabangelwa isifo samathambo.
The I-American Academy of Dermatology futhi uphakamise ukuthi isihloko Imikhiqizo ye-CBD eyodwa ingasetshenziswa njengesengezo se-eczema ne-psoriasis emhlanganweni wabo waminyaka yonke ngo-2018.
Lezi zici zingaba nomthelela ekusebenzeni kwe-CBD.
Izinga le-CBD Cream
I-CBD Cream Yokukhulula Izinhlungu
The i-endocannabinoid (ECS) iseli-signaling system wuhlelo abantu abanalo.
Ososayensi bakutholile lokho I-CBD isebenzisana nengxenye eyinhloko ye-ECS, i-endocannabinoid (noma ubuchopho) receptor.
Amaprotheni amancane abizwa ngokuthi ama-receptors anamathela kumaseli. Lawa maseli anesibopho sokwamukela amasiginali angamakhemikhali amaningi futhi awasabalalise emzimbeni wakho wonke.
Lokhu kusabela kudala imiphumela edambisa izinhlungu, eqeda ukuvuvukala esiza ekulawulweni kobuhlungu bomzimba wakho. Izihloko ze-CBD kanye nemikhiqizo ye-CBD ingaba yinzuzo kubantu abahlukunyezwa ubuhlungu obungapheli obufana nobuhlungu beqolo.
1 Ukubuyekeza kwe-2018 wabonisa ukuthi i-CBD ingasetshenziswa kanjani ngokuhambisana nobuhlungu obungapheli. Lolu cwaningo luhlole ukuhlola okwenziwa phakathi kuka-1975-March 2018. Ucwaningo lufake phakathi:
I-CBD Cream Yokukhulula Izinhlungu Ze-Arthritis
A Ucwaningo luka-2016 nguMthombo ihlole ukusetshenziswa kwe-CBD kumagundane athambekele ku-arthritis.
Izinsuku ezine, ososayensi bafaka ukhilimu we-CBD kumagundane. Usuku ngalunye, amagundane anikezwa noma 3.1, 0.6, 6.2, 62.3, noma 62.3 mg we-CBD cream. Ososayensi babone ukuncipha kokuvuvukala kanye nobuhlungu obuphelele emalungeni amagundane. Akubanga namiphumela emibi ngokushesha ngemva kokuhlolwa.
Imithamo ephansi ye-3.1 mg noma i-0.6 mg ayizange ibonise ukuthuthuka kwezikolo zezinhlungu. Ososayensi bathola ukuthi i-6.2 mg/day yayanele ukunciphisa ukuvuvukala kwamagundane.
Amagundane athola i-62.3 mg ngosuku abonise imiphumela efanayo naleyo enikezwe i-6.2 mg / ngosuku. Abazange bathole umkhawulo ophansi wobuhlungu ngokuthola umthamo ophakeme kakhulu.
Ukhilimu we-CBD ungase ukwazi ukudambisa izinhlungu futhi unciphise ukuvuvukala kubantu abaphethwe isifo samathambo. Kudingeka ucwaningo olwengeziwe lwabantu.
(35) Odinga ukukwazi ngaphambi kokusebenzisa imikhiqizo yokudambisa izinhlungu ye-CBD yamahhala l GMA YouTube
Ulwazi Olwengeziwe ngokhilimu we-cbd wobuhlungu nge-trytranquil.net
Ukhilimu wobuhlungu we-CBD uyikhambi lemvelo lamalunga nemisipha. Abantu bafunga ngalo mkhiqizo futhi bazame lonke elinye ikhambi. Ukhilimu we-CBD ungasetshenziswa kunoma iyiphi ingxenye yomzimba, noma ezindaweni ezithile. Maningi amabhrendi atholakalayo anamandla ahlukene. Yize okuqukethwe kwe-CBD kwale mikhiqizo kuhlukile, iningi lisebenza ngendlela efanayo. Ukhilimu ungasetshenziswa ukwelapha izinhlungu ezihambisana nokuqaqamba kwamalunga nemisipha.
Ukhilimu wezinhlungu we-Trytranquil we-CBD owaziwa kakhulu. Iqukethe 400mg we-CBD encibilika emanzini, kanye nezinye izithako zebhotanical ezisebenzayo, ukudambisa izinhlungu ezihlobene nokuvuvukala, ama-sprains kanye nesifo samathambo. Kuphephile kokubili izingane kanye nabantu abadala ukufaka isicelo ezindaweni ezithintekile izikhathi ezingu-3-4 ngosuku. Ngaphambi kokusebenzisa ukhilimu emzimbeni wakho, thintana nodokotela.
Faka ukhilimu wezinhlungu we-CBD ngqo endaweni. Kufanele usebenzise ukhilimu kuyo yonke indawo. Ungawuhlikihli. Kungathatha noma yikuphi ukusuka kumaminithi angu-10 kuye kwamahora angu-2 ukuze imithelela ingene. Vumela isikhathi esanele sokuthi imiphumela isebenze. Uma kunesidingo, ungaphinda isicelo izikhathi eziningi nsuku zonke. Ngaphambi kokusebenzisa lo mkhiqizo ezinganeni, kubalulekile ukubonisana nodokotela.
Okhilimu bezinhlungu be-CBD bavela ku-100mg kuya ku-3,000mg imbiza ngayinye. Kungase kudingeke ukuthi uzame ukugxilisa okuhlukile kwe-CBD ukuze uthole leyo esebenza kangcono ngezidingo zakho. Abanye abantu badinga ukuhlushwa okuphezulu kwe-CBD ukuze bakhululeke. Abanye babika ukukhululeka okufanayo ngomkhiqizo we-100mg. Ngakho-ke kufanele uzame izimbiza ezehlukene uze uthole elungile. Ungazama amabhrendi ahlukene nemithamo kuze kube yilapho eyodwa ikusebenzela.
Zonke izithako zemvelo ziyindlela engcono kakhulu yokwenza i-CBD Pain Cream enhle. Akuyona i-GMO futhi ayinalo unya. Yenziwe nge-hemp esimeme. I-CBD Pain cream isebenza ngendlela efanayo nolunye uketshezi. Lapho ukhetha ukhilimu we-CBD, kubalulekile ukucabangela ukuhlushwa. Nokho, isazosebenza uma usebenzisa umkhiqizo njalo. Ingasetshenziswa emzimbeni nasebusweni bakho.
Ngikubize.com futhi yenza imikhiqizo ye-CBD yama-topical. I-Redemperorcbd.com ingumholi embonini ye-hemp. Le nkampani iklonyeliswe ngendondo ye-PM360 Trailblazer Award 2020 yoMkhiqizo Ongcono Kakhulu Wemvelo kanye ne-GDUSA American Packaging Design Award. Lo mbhangqwana uyisibonelo esihle kakhulu senkampani esebenzisa i-CBD ukuxazulula izinkinga zansuku zonke. I-Redemperorcbd.com wumkhiqizo ohlinzeka nge-CBD Pain Creams. Lo mkhiqizo uthandwa yibo bobabili abasebenzisi abaqaphela impilo kanye nabangenandaba nezempilo.
I-CBD Pain cream ingathengwa ekhemisi lendawo noma esitolo sezempilo. Ingathengwa ku-inthanethi noma kumthengisi wangakini. Qiniseka ukuthi umkhiqizo awenziwanga ngensangu. Kufanele uhlale ufunda ilebula uma ungaqiniseki. Akukho emthethweni ukumangalela ukuthi umkhiqizo uqukethe i-hemp. Imikhiqizo emihle izoba nesitifiketi esisemthethweni futhi ayikho imiphumela emibi. Ayinawo amakhemikhali ayingozi nezinye izithasiselo okwenza kube ukukhetha okuhle kakhulu kubantu abanesikhumba esibucayi.
I-CBD Pain creams isetshenziselwa ukudambisa izinhlungu. Iqukethe i-CBD egcwele ye-spectrum ekhule ngokuphilayo kanye nengxube yezitshalo ze-terpenes, i-botanicals, nezinye izithako. Isithako esiyinhloko se-CBD Pain Cream i-iarnica. Inezici zokulwa nokuvuvukala kanye ne-menthol isiza enqubo yokupholisa. Lo khilimu uqukethe novithamini E namafutha kakhukhunathi njengezithako zemvelo. Lo mkhiqizo unganikeza ukukhululeka kobuhlungu kuze kube amahora angu-24.